တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ကျောင်းမှားရောက်လာသည့် ကျောင်းသားသုံးဦးကို မီးတန်းယာဉ်/ ဆိ - Yangon Media Group
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် မြန်မာစာဖြေဆိုရန် ကျောင်းလွဲမှားရောက်လာသောကျောင်းသားသုံးဦးကို မီးတန်းယာဉ်/ဆိုင်ကယ်တို့ဖြင့် ဖြေဆိုမည့်ကျောင်းများသို့ လိုက်ပို့ပေးခဲ့ရကြောင်း အမှတ်(၂)ယာဉ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှ ဒုရဲမှူးကြီးသိန်းဦးက ပြောသည်။ ”စာမေးပွဲဖြေဆိုမယ့်ပထမ နေ့မှာ ဖြေဆိုမယ့်ကျောင်းလွဲမှား ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူစုစုပေါင်း သုံးဦးတို့ကို စာစစ်ဌာနတွေရှေ့မှာ တာဝန်ထမ်း ဆောင်ပေးနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖြေမယ့် ကျောင်း တွေဆီကိုအချိန်မီ ရောက်အောင်လိုက်ပို့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကြည့်မြင်တိုင် အ.ထ.က (၂)တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် ကျောင်းသူနှစ်ဦးသည် ကြည့် မြင်တိုင် အ.ထ. က(၁)သို့ လွဲ မှားရောက်ရှိခဲ့သဖြင့် ကြည့်မြင်တိုင် အ.ထ.က(၂)ကျောင်းသို့ မီးတန်းယာဉ်ဖြင့် တာဝန်ကျယာဉ် ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့များက လိုက်ပို့ပေးခဲ့ ကြကြောင်းသိရသည်။အလားတူအ.ထ.က(၂)ကြည့်မြင်တိုင်တွင် စာမေးပွဲဖြေ ဆိုရမည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် အ.ထ. က(၂)စမ်းချောင်း သို့လွဲမှားစွာရောက်ရှိခဲ့သဖြင့် မီးတန်းဆိုင်ကယ်ဖြင့် အ.ထ .က (၂)ကြည့်မြင်တိုင်သို့ တာဝန်ကျ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့များက လိုက်ပို့ပေးခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေး ပွဲဖြေဆိုမည့်နေ့မှာ မတ် ၆ ရက် မှမတ် ၁၅ ရက်အထိဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိစာစစ်ဌာန ၁၄၂ ခုတွင် ယာဉ်ထိန်းရဲအင်အား ၃၁၁ဦးဖြင့် ယာဉ်ကြောရှင်းလင်းရေး၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများယာဉ်/ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် အချိန်မီစာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရေးတို့အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေ ကြောင်း အမှတ်(၂)ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှ ဒုရဲမှူးဆန်း ထွန်းကပြောသည်။ ”ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား တွေကိုရှိသမျှ စာစစ်ဌာနတွေရှေ့ မှာချထားပေးမယ်။ အခက်အခဲရှိ လို့ အကူအညီတောင်းလိုက်ရင် ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယမန်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာ မေးပွဲဖြေဆိုချိန်ကလည်း စာမေးပွဲခန်းဝင်ရန် ဝင်ခွင့်ကတ်ကျန်ခဲ့သည့်ကျောင်းသားတစ်ဦးရှိခဲ့ပြီးယင်းကျောင်းသား၏ကတ်ပြားကို ယာဉ်ထိန်းဆိုင်ကယ်ဖြင့်ပြန်ယူကာဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသို့စာမေးပွဲအချိန်မီလိုက်ပို့ပေးခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ ယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်မှဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်အထိ စတုတ္ထတန်း အစိုးရစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ရက်အထိ အဋ္ဌမတန်းအစိုးရစစ်စာမေးပွဲဖြေဆိုခဲ့ ကြရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျောင်းပေါင်း ၁၄၄ ကျောင်းတွင် စာမေးပွဲကာလအတွင်းယာဉ် ထိန်းရဲအင်အား ၃ဝဝ ကျော်ဖြင့် ယာဉ်ကြောရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၂ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အသက် (၁၈) ပြည့်ပြီးသူ ဦးရေ ငါးသန်းခန့် တိုးလာမည်ဟု မျှော်မှန်းကာ ဥပဒေ?